Duqaynta magaalada Ximsi ee dalka Suuriya oo sii socota – Radio Daljir
Xibsi,Feb 15 -Ciidamada dalka Suuriya ayaa maalintii 10-aad sii wada duqaynta magaalada badhtamaha dalkaasi ku taalla ee Ximsi, sida ay sheegayaan kooxaha u dhaqdhaqaaqayaasha ah ee dalka Suuriya , waxana duqayntan ay imanaysaa,iyadoo madaxa golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey haweeneyda Navi Pillay ay sheegtay in fashilkii golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee qaraarkii ka dhanka ahaa Suuriya uu ku dhiirigeliyey dowladda Suuriya in ay xoojiso weerarada ay ku hayso shacabkeeda.
Ugu yraan 7 qof ayaa dhintay 20 kalen waa ay dhaawacmeen salaasadii shalaytoole ,kaddib markii ciidamada Suuriya ay hubka culus ku garaaceen degmada babul Camar ee magaalada Ximsi.
Degmooyinka Babul Camar iyo Inshaat ayaa waxaa ku socotay duqaymo joogto ah,iyadoo kooxaha halkaasi ka dagaalamaya ay in nidar ku galeen in ay dagaalamayaan illaa dhibicda dhiigooda ugu danbeysa, islamarkaana aanay is dhiibidoonin.
Iyadoo ciidamada dowladu ay isku dayayaan in ay la wareegaan degaanada ay iska caabintu ka socoto ee dalka Suuriya Sida Babul Camar iyo Inshaat, ayaa la soo sheegayaa in dadka rayidka ah ay ka cararayaan degaanadaasi, iyadoo Taangiyada ciidamada dowladu ay meelo badan oo ay ku jiraan guryaha la deganyahay ay xarumo ka samaysanayaan, sida ay sheegeen dadka rayidka ah iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqayaasha ah.
Ciidamada Suuriya ayaa sidoo kale la soo weriyey in ay duqeeyeen magaalada Taybeh ee gobolka Dirca.
Isniintii gabadha madaxda ka ah golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey ayaa golaha loo dhanyahay ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa sheegtay in baacshada ciidamada Bashaar Assad ee Mucaaradka ay noqonkaraan denbi ka dhan ah aadanaha,waxana ay ku baaqday in arinta xukuumada Suuriya loo weeciyo dhinaca maxkamadda Denbiyada ee Caalamiga ee The Hague.
Wakiilka Suuriya ee qaramada midoobey Bashaar Jacfari ayaa sheegay in hadalka Navi Pillay uu ahaa mid ay dhagari ka muuqato ,waxana uu ku adkaystay in dalkiisa ay dibadda ka soo weerareen ururo argagaxiso ah.
Dhinaca kale wasiirka arimaha gudaha ee dalka Ciraaq ayaa sabtidii sheegay in Alqaacida iyo Jihaadiyiintu ay ka anbabaxayaan dalkiis oo ay imika ku qulqulayaan dalka Suuriya ,waxana uu sidoo kale tilmaamay in dagaalyahamiinta shisheeye ay dalka Suuriya ka gelaayan dalalka carabta ee ka horjeeda Suuriya ,laakiin dad badan ayaa rumaysan in hadalkani ka soo yeedhay dowladda ay Shiicadu u badantahay ee dalka Ciraaq uu yahay mid siyaasadeed oo lagu baqdingelinayo reer galbeedka.
Hadalkan waxaa si weyn u fogeeyey Col Cariif Nuur Al-xamuud oo ah ku xigeenka taliyaha ciidamada isku magcaabay ciidamada Suuriya ee xorta ah ,laakiin waxa uu ka digay in xaaladdaa wax laga qabanwaayo.
Hogaamiyaha Al-qaacida Ayman Al-dawaahiri ayaa dhowaan bogaadiyey kacdoonka Suuriya, waxana xilliyadii ugu dameeyey soo baxayey weeraro qaraxyo ah oo lala bartilmaameedsanayey ciidamada dowladda Suuriya.